Allgedo.com » 2012 » October » 27
Home » Archive Daily October 27th, 2012
Deg Deg: Qarax xooggan oo goordhow gil-gilay Magaaladda Kismaayo
Qarax xoogan ayaa goordhow laga maqlay magaaladda Kismayo ee gobolka Jubada Hoose. Qaraxan ayaa lasoo sheegayaa inuu ahaa bambo nooca dhulka lagu aaso ah oo lala beegsaday ciidamada dowlada ee kusugan kaniisadii hore ee Talyaaniga . Ku dhawaad 2 askari ayaa lasoo sheegayaa in ay geeriyoodeen kuwa kalana ay dhaawacmeen. Dad kusugan Kismaayo ayaa soo sheegaya in xaaladu ay tahay mid aad ucakiran, waxaana...
Faroole oo soo dhaweeyay Maamul usamaynta Jubooyinka kana digay qabiilo gaar ah ‘Daawo Muuqaal”
Madaxweynaha Maamul goboleedka Soomaaliyed ee Puntland ayaa soo dhaweeyay qorshaha Maamulka loogu samaynayo goboladda Jubooyinka. Waxaa uu sheegay in ay la socdaan qorshaha lagu samaynayo Jubaland kaas oo uu sheegay inu yahay mid wanaagsna. Hase ahaatee Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in ay jiraan dad qaab qabiil wax uwada oo diidan nabada iyo maamul usamaynta Jubooyinka. Dr Faroole ayaa soo hadal...
Amisom oo guulo ka sheegatay dagaal ka dhacay duleedka Kismaayo
Bayaan kasoo baxay Taliska ciidamada Amisom ayaa waxaa looga hadlay dagaal ka dhacay duleedka Magaaladda Kismaayo. Dagaalkan ayaa si gaar ah kaga dhacay deegaanka Buulo-Xaaji oo ku dhow magaaladda Kismaayo. Warsaxaafadeedka ayaa waxaa lagu sheegay in ku dhawaad 20 kamid ah dagaalyahanada Shabaab lagu dilay dagaalka, howlgalkana sidii loo baahnaa uu kusoo dhamaaday. Sidoo kale Amisom ayaa qiratay...
Madaxweynaha dowlada oo balanqaaday in isbadal uusamayn doono
Madaxweynaha dowlada Soomaaliya Xasan Sh Maxamuud ayaa balan qaaday in dowladiisa ay samayn doonto isbadal balaaran oo ka duwan kuuwii horey looga bartay dowladihii Soomaaliya. Xili uu Muqdisho kula hadlayay Xildhibaano iyo xubno kale oo dowlada katirsan ayaa Madaxweyne Xasan Sh waxaa uu sheegay in isbadalka uu ku xiran yahay sida shacabka Soomaaliyeed ay ugarab isatagaaan dowladiisa. “Waxaa...
DAAWO SAWIRADA: Kismaayo oo si farxad leh looga ciiday
Magaaladda Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ayaa looga ciiday si kaduwan sidii hore, iyadoo mudo kadib dadka magaaladda ay ciideen xili magaaladda ay gacanta ku hayso dowlada Soomaaliya. Kumanaan shacab ah ayaa isugu soo baxay fagaarayaasha waa weyn ee salaadda lagu dukado halka gudaha magaaladda lagu arkayay dad damaashaadaya farxada aawadeed. Amaanka Magaaladda Kismaayo ayaa aad loo adkeeyay, iyadoona...
Saraakishii Shabaab ee Jubooyinka oo Salaadii Ciida ka tujiyay Jilib “Daawo Sawiro”
Magaaladda Jilib ee gobolka Jubada dhexe ayaa waxaa looga ciiday si weyn, iyadoona qaar kamid ah Saraakiishii Shabaab ee goboladda Jubooyinka ay kusugnaayeen halkii lagu dukanayay. Dad kusugan Jilib ayaa AOL usheegay in Saraakiishii Shabaab ay dadka salaada kula dukadaeen Barxad kutaal gudaha Magaaladda. Waxaa ay ugu baaqeen shacabka in ay ka qeyb qaataan difaaca goboladda Jubooyinka. Al-Shabaab-ka...
Baardheere oo si weyn looga ciiday “Daawo Sawirada”
Magaaladda Baardheere ee gobolka Gedo ayaa waxaa looga ciiday si balaaran iyadoona kumamaan kun ay kasoo qeyb galeen dukashada SALAADA. Saraakiisha Shabaab ee gobolka Gedo ayaa iclaamiyay halka lagu dukanayo Salaada, iyadoo halkaasna ay khudbado ka jeediyeen. Abuu Salma Gudoomiyaha Shabaab ee GEDO ayaa shacabka gobolkaas ugu yeeray in ay ka qeyb qaataan dagaalka ka soconaya goboladda dalka gaar ahaan...